Sunscreen အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Zin Zin Yu
သနပ်ခါးနဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ Sunscreen လိုချင်လို့ပါ ??
------- Sunscreen ရှိတယ်လေ
လုံးဝမကြွေပါဘူးကွယ် Sunscreen လေးလူး
တကယ်လားမရေ Sunscreen ချည်းပဲရောလိမ်းလို့ရလား နေ့တိုင်းရောလိမ်းလို့ရလားဟင်?
ရတာပေါ့ညီမလေးရယ် မိတ်ကပ်လိုထူထူကြီးဖြစ်နေတာမကြိုက်ပဲ သဘာဝ Natural လေးအတိုင်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူလေးလိမ်းချင် အဲဒါလိမ်းညီမလေးရေ
Cc +Collagen ပါတဲ့ Sunscreen လေးသာလိမ်းပါလို့
သူက CC Base အခြေခံထားတော့ ညီမလေးမျက်နှာအသားမညီတာတွေ
ညီမလေးက နေ့တိုင်းလူးချင်တာ ?
SPF 50PA+++ အထက်ကိုမှသုံးရင် 98%ကာကွယ်ပေးတာညီမလေးရေ
ဒါမှ နေလောင်တာတို့ တင်းတိတ်မှဲ့ခြောက်ဝက်ခြံတွေ ကာကွယ်ပေးမှာကွဲ့
UVA အပြင် UVB အမှန်တကယ်၂မျိုးလုံးကာကွယ်ပေးတဲ့
Sunscreen ကိူရွေးသုံးရမယ်နော် အဲဒါမှ ညီမလေးရဲ့မျက်နှာအတွင်းပိုင်းလွှာထိနေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတာကွဲ့
Collagen ပါတဲ့ Sunscreenကို လိမ်းရင် ညီမလေးမျက်နှာဖြူလာမယ် ဝက်ခြံတွေပျောက်လာမယ်
နေ့တိုင်းသုံးလို့ အသားရေပါ ထိန်းသိမ်းပေးသေးတာ
ဒါနဲ့မမ မ်ိတ်ကပ်တွေ Day Cream အထူတွေလို
အာ့ Sunscreen ကလေ ပုတ်လိမ်းရင်တောင်ရတယ်ကွယ်
အဲလောက်နုညက်ပြီး Cream သားကောင်းတာဝေ့
အာ့ကြောင့် မပင်မပန်း အရမ်းမဆွဲရပဲလိမ်းလို့ရတော့
ဈေးကရောမမ ညီမလေးက ကျောင်းသူမို့ အရမ်း
ညီမလေးရေ Quality နဲ့တန်တဲ့ Sunscreen ရှာတွေ့ထားတယ် 13 gram ကြီးတောင်ပါတာမှ
နာမည်လေးပြောပြပေးပါ မမ နော်
ညီမလေးရေ အခုFeedback တွေအရမ်းရပြီးတကယ်ကောင်းတဲ့ မေဘရဏီSunscreenလေးသာ ဝယ်သုံးပါတော့ကွယ်
မမအခုသုံးနေတဲ့ မေဘရဏီ Sunscreen လေးပါပဲကွယ်
မေဘရဏီလေးကို ဖောက်သည်ယူလိုသူများ.တနိုင်တပိုင်ကိုယ်စားလှယ် လုပ်လိုသူများအနေနဲ့.......
မဇင်ဇင်ယု(မရမ်းကုန်း မြို့နယ် တဦးထဲ ကိုယ်စားလှယ်)
သမိုင်းလမ်းဆုံပြီး နောက်တဂိတ် ကုလားကျောင်းကားဂိတ်ဆင်း ခိုင်ဇော် သဘောင်္ဆေးဆိုင်ရှေ့
ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ os စလုပ်မယ့်ညီအမ များကို နွေးထွေးစွာ ကြိူဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်
လက်လီဝယ်ယူလိုသူများနှင့်ဖောက်သည်လိူချင်သူများ ထပ်မံဆက်သွယ်နိုင်မယ့် လိပ်စာများကတော့.....
Chu Online Shopping
2. မမီမီအောင် (Wholesale)
Tiny stream online shop
အမှတ်(86)/7လွှာ A, နံ့သာလမ်း/အလုံ
Fb acc- အံ့ဘုန်းမေမေ
အပေါ်မှာ တင်ထားတယ့် လိပ်စာအနီးမှာနေသူများဟာလည်း ဖောက်သည်ကို အေးဆေးစွာယူနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းက companyက တသတ်မတ်ထဲ ချမှတ်ပေးထားလို့ ဈေးနည်းတာများတာ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးနော်
ဖောက်သည်ဟာ ၁၂ဗူးမှ စယူနိုင်ပြီး 6လအတွင်းtarget ပြည့်မှီပါက ငွေသား ၅သောင်းချီးမြှင့်ပေးမှာပါ
တနိုင်တပိုင်ကိုယ်စားလှယ်ဟာ ၆၀ဗူးမှ.စယူနိုင်ပြီး 6လအတွင်း target ပြည့်မှီပါက ငွေသား ၇သောင်း ခီးမြှင့်ပေးမှာပါ
မေဘရဏီ ယူရောင်းတယ့်သူတိုင်းကို မန်ဘာကဒ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး မေဘရဏီ pageမှာတရားဝင် ကြော်ငြာပေးဦးမှာပါ
အမြတ်လည်းရမယ့်အပြင် ကြိုးစားရင်.ကြိုးစားသလောက် အကျိုးခံစားခွင့်တွေရှိဦးမှာနော်
ဒီတိုင်းနေရင် ဘာဝင်ငွေမှ မရောက်လာဘူးနော် ဖုန်းလေးတလူံးသူံးပုံမှန် postလေးတင်ရုံနဲ့ ဝင်ငွေတွေတိုးလာမယ့်အခွင့်အရေးလေးမို့ အမြန်ဆုံး အတူလက်တွဲ လုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်